Zvese nezve cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, .. ICOs, kutengesa
Zvese nezve cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, ...
Bitcoin, Ether, Litecoin, Monero, Faircoin… dzatove zvikamu zvakakosha zvenhoroondo yehupfumi hwenyika. Blockchain, wallet, Humbowo hweBasa, Humbowo hweBasa, Humbowo hwekubatana, smart makondirakiti, atomic swaps , mheni network, Kuchinjana, ... mazwi matsva ehunyanzvi tekinoroji iyo, kana tikaifuratira, inotiita chikamu chechikamu chitsva. kusagona kuverenga nekunyora 4.0.
Munzvimbo ino isu tinonyatso ongorora chokwadi che cryptocurrencies, isu tinotaura pamusoro penhau dzakanyanya kukosha uye tinoratidza mumutauro unosvikika zvakavanzika zvese zvepasirese zvedecentralized currencies, block chain tekinoroji uye zvese zvingangoita zvisingaperi.
1 Chii chinonzi blockchain?
2 Chii chinonzi cryptocurrency?
4 Zvikwama kana zvikwama
5 Chii chinonzi kuchera?
6 ICOs, nzira nyowani yekupa mari mapurojekiti
Blockchain kana cheni yezvivharo ndeimwe yeanonyanya kukanganisa matekinoroji ezana ramakore re21.. Iyo pfungwa inoita seyakapusa: akafanana dhatabhesi akagoverwa mune decentralized network. Uye zvakadaro, iri kuva hwaro hwehutsva hwehupfumi paradigm, nzira yekuvimbisa kusachinjika kweruzivo, kuita kuti imwe data iwanikwe nenzira yakachengeteka, kuita kuti iyo data ive isingaparare uye kunyange kukwanisa kuita akangwara zvibvumirano avo. mazwi anozadzikiswa pasina kukanganisa kwevanhu. Ehe saizvozvo, zvakare democratizing mari nekubvumira kusikwa cryptocurrencies.
A cryptocurrency imari yemagetsi iyo kuburitsa, kushanda, kutengeserana uye chengetedzo zvinoratidzwa zvakajeka kuburikidza nekriptographic evidence. Cryptocurrencies yakavakirwa paBlockchain tekinoroji inomiririra nzira nyowani yemari yakaderedzwa pasina ane simba pamusoro payo uye inogona kushandiswa semari yatagara tichiziva kusvika zvino nezvakanakira zvakawanda. Cryptocurrencies inogona kuwana kukosha kwavanopihwa neruvimbo rwevashandisi, zvichibva pakupihwa uye kudiwa, mashandisirwo uyezve hunhu hwakawedzerwa hwenharaunda inovashandisa uye inovaka ecosystem yakavatenderedza. Cryptocurrencies ari pano kuti agare uye ave chikamu chehupenyu hwedu.
Bitcoin yaive yekutanga cryptocurrency kugadzirwa kubva kwayo Blockchain uye, saka, ndiyo inonyanya kuzivikanwa. Yakanambwa senzira yekubhadhara uye kuendesa kukosha iri nyore kushandisa, nekukurumidza, yakachengeteka uye yakachipa. Sezvo kodhi yayo yakavhurika sosi, inogona kushandiswa uye kugadziridzwa kugadzira akawanda mamwe makriptoakti ane humwe hunhu uye, kazhinji, nemamwe akawanda kana mashoma anofadza mazano nezvinangwa. Litecoin, Monero, Peercoin, Namecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Digibyte, Bytecoin, Ethereum… mamwe acho asi kune zviuru. Mamwe akabatana nemapurojekiti akawanda ane hukama nehunyanzvi ari kuchinja magadzirirwo atinoita ruzivo, data uye kunyangwe hukama hwemagariro. Kune dzimwe dzakapihwa nehurumende, semhinduro kumatambudziko adzo ehupfumi, sePetro yakapihwa nehurumende yeVenezuela uye inotsigira nematura ayo emafuta, goridhe nemadhaimani. Mimwe imari yemubatanidzwa wemafambisirwo emhando inopokana-capitalist uye kuvaka shanduko yehupfumi ecosystem kune yavanodaidza kuti post-capitalist era, seFaircoin. Asi pane zvakawanda kupfuura pfungwa dzehupfumi dzakatenderedza cryptocurrencies: masocial network ayo anopa mibairo yakanakisa neayo cryptocurrency, network yedecentralized faira hosting, misika yemidziyo yedhijitari… mikana yacho inenge isingaperi.
Zvikwama kana zvikwama
Kuti utange kudyidzana nenyika ye cryptocurrencies, iwe unongoda chidimbu chidiki chesoftware, chishandiso chinoshandiswa kugamuchira uye kutumira ichi kana icho cryptocurrency. Zvikwama, zvikwama kana zvikwama zvemagetsi zvinoverenga zvinyorwa zveBlockchain uye uone kuti zvipi zveAccounting zvine hukama nemakiyi akavanzika anoazivisa. Ndokureva kuti, aya maapplication "anoziva" kuti mangani emari ako. Iwo anowanzo kuve ari nyore kushandisa uye kana akanyanya kukosha maficha ekushanda kwavo uye chengetedzo anzwisiswa, anova bhangi chairo kune avo vanoashandisa. Kuziva kuti chikwama chemagetsi chinoshanda sei kwakakosha kutarisana neramangwana iro ratova pano.
Chii chinonzi kuchera?
Migodhi ndiyo nzira iyo cryptocurrencies inogadzirwa. Ipfungwa yekuvandudza asi ine imwe yakafanana neyechinyakare migodhi. Panyaya yeBitcoin, ndeye kushandisa simba remakomputa kugadzirisa dambudziko remasvomhu rinounzwa nekodhi. Zvakafanana nekuedza kutsvaga password nekutevera kuyedza misanganiswa yemabhii nenhamba. Kana, mushure mekushanda nesimba, unoiwana, block inogadzirwa nemari nyowani. Kunyangwe zvisiri izvo zvakakosha kuziva chero chinhu nezve migodhi kushandisa cryptocurrencies, ipfungwa yaunofanirwa kujairana nayo kuti uve neiyo crypto tsika yechokwadi.
ICOs, nzira nyowani yekupa mari mapurojekiti
ICO inomirira kuti Initial Coin Offering. Iyo inzira iyo mapurojekiti matsva munyika yeBlockchain anogona kuwana mari. Kugadzirwa kwematokeni kana mari yedhijitari inotengeswa kuti iwane zviwanikwa zvemari uye kugadzira mapurojekiti akawanda kana mashoma akaomarara. Kusati kwabuda tekinoroji yeBlockchain, makambani aikwanisa kuzvipa mari nekupa migove. Ikozvino chero munhu anogona kuburitsa yavo cryptocurrency achitarisira kuti vanhu vachaona inonakidza mikana yepurojekiti yavanoda kuvandudza uye vofunga kuisa mari mairi nekutenga zvimwe. Iyo imhando yekuunganidza vanhu vazhinji, demokrasi yezviwanikwa zvemari. Iye zvino zviri mukati memunhu wese kuti ave chikamu chezvirongwa zvinonakidza kunyangwe, zvakare, nekuda kwekushaikwa kwemirau, maICO anogona kutangwa ane mapurojekiti ehunyengeri hwakakwana. Asi icho hachisi chipingamupinyi chekutendeudzira maziso ako kune rimwe divi; mukana wekuwana kudzoka kwakanaka kunyangwe kubva kumari idiki kwazvo uripo. Ingori nyaya yekudzidza zvishoma nezveimwe neimwe yeiyi pfungwa. Uye pano tichakuudza chinonyanya kufadza kutanga.